နက်ရှိုင်းတဲ့ အချစ် – Grab Love Story
မိုးစက် နှုတ်ခမ်းတွေ နဲ့ မဲဇာ နှုတ်ခမ်းတွေ တော်တော် နဲ့ ခွာလို့မရကြဘူး ..။ နှုတ်ခမ်းချင်း ဂဟေဆက်နေကြတာ အကြာကြီး . .။ မဲဇာ ကလဲ မိုးစက် ကို ဖက်ထားတာ ကိုယ်တွေ ပူးကပ်နေ သည် ..။ မိုးစက် ရဲ့ မို့မောက် ကော့တင်းနေတဲ့ ရင်သားတွေ မဲဇာရဲ့ ရင်ဘတ်ကြီး မှာတအားကပ် နေသည် ..။ မဲဇာ ရဲ့ လက်ဖ၀ါးတွေက မိုးစက် ခါးလေး ကို တအားဖက်ထားရာက အောက်ဘက် ကို ရွေ့လျား သွား သည် ..။ ခါးသေးသေးလေး အောက် က ၀ိုက်ကားဖုထွက်နေတဲ့ တင်ပါးအိအိတွေ ကို ပွတ်သပ်နေ သည် ..။ မိုးစက် လဲ မဲဇာ ကို တအားပြန်ဖက်ထား နေမိပြီး ရင်တွေ အရမ်းတုန်နေပြီး ဘာကိုမှ မသိတော့ ..။ မဲဇာ နဲ့ နမ်းတိုင်း မိုးစက် ပေါင်ခွဆုံ က ပတ်ပတ် က အရေတွေ တအား ယိုစီးကျလာတာ မိုးစက် သတိထားမိ နေသည် ။ မဲဇာ က မိုးစက် ကို နမ်းနေရာ က နှုတ်ခမ်းချင်း အခွာမှာ မတ်တပ် ထ ရပ်လိုက် သည် …။ “ ချစ်တယ်..မိုးစက် ရယ် ..ကိုကို မိုးစက် ကို သိပ်ချစ်တယ် …ကိုကိုတို့ ဒီ လောက် နဲ့ဘဲ ရပ်လိုက်ကြရင် ကောင်းမယ် ..ကိုကို လေ..မိုးစက် ကို လက်ထပ်တဲ့အချိန် ရောက်တဲ့အထိ ဒီထက် မလွန်ချင်ဘူး ..မိုးစက် ကို ကိုကို က တကယ် ချစ်တာပါ ..ကိုကို့မေတ္တာ ကသန့်စင်ကြောင်း ကိုကို ပြချင်တယ် ..” မဲဇာ သည် တကယ်ဘဲ မိုးစက် ကို လွန်လွန်ကျူးကျူးတွေ လုပ်မိသွားမှာ စိုး သည် ..။
အဆုံးစွန် အထိ ချစ်မပစ်လိုက်ချင် …။ သူ့ဘ၀ သည် ရေရာ လှတာ မဟုတ်ဘူး ..။ သူ့စိတ်ထဲ သူ တခုခု ဖြစ်လိမ့်မည် လို့ ထင်နေသည် ..။မိုးစက် နဲ့ ပေါင်းစပ်နိုင်ဖို့က မရေရာ ..။ မိုးစက် ကို မချစ်ဘဲကလဲ မနေနိုင်ခဲ့ ။ုမတော်တဆ ကလေးတွေ ဘာတွေ ရသွား ပြီး သူ က သေသွား ရင် မိုးစက်လေး ဒုက္ခတွေ ရောက်မှာ ကို မလိုလားဘူး ..။ နယ်စပ် မှာ တုံး က သူဆော်ထည့်လိုက် လို့ အထိနာသွား တဲ့ “ ရွှေနဂါးသိန်းမြင့် ”တို့ အုပ်စု က သူ့ကို မကျေ ပွဲ အနေနဲ့ ၇န်ပြုလာမှာ သေချာ သည် ။ မဲဇာ သက်ပြင်းရှည်ကြီး မှုတ်ထုတ်ပြီး မိုးစက် ကို ထားခဲ့ပြီး မိုးစက် အခန်းထဲက ထွက်သွားဖို့ လုပ်သည် ..။ သူ့ဘောင်းဘီ အရှေ့မှာ မာကျောတဲ့ အမြောင်းကြီး ဖုထွက်နေသည် ..။ မိုးစက် ဒီနေရာ ကို မဲဇာ ထရပ်လိုက်ကထဲက မြင် သည် ..။ မဲဇာ လဲ..မိုးစက် ကို..“ ကိုကိုသွားတော့မယ် မိုးစက် ..မနက်ကျရင် တွေ့မယ် လေ . .ကိုကိုတို့ မနက် ကန်တော်ကြီး မှာ ပြေးကြမလား . .” လို့ ပြော၇င်း ခြေလှမ်းပြင် သည် ..။ သူ့စိတ်တွေ တအား နိုး ကြွနေပါရက်နဲ့သူ စိတ်ကို ချုပ်ထိန်း ပြီး သွားဖို့ လုပ်တာ . .။ “ ကိုကို ..မိုးစက် ကို ဒီလိုကြီး မထားခဲ့နဲ့လေ ..ကိုကို နဲ့ နေချင်သေးတယ် ကွာ . .” သူ့လက်ကို မိုးစက် ဖမ်းဆွဲထား သည် ..။ မိုးစက် စိတ်တွေ တအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် နိုးကြွနေ သည် ..။ ကိုကို နဲ့ ဆက် ပြီး နမ်းချင်နေသည် ..။
ကိုကို့အကိုင်အတွယ်တွေကို လိုချင်နေ သည် ..။ မိုးစက် ကိုကို့ကို ချစ်တဲ့ ကိစ္စ မှာ ဘာကိုမှ မကြောက်ဘူး ..။ ဘာကိုမှဂရုမစိုက်ဘူး ..။ တလောက လုံးကို ရင်ဆိုင်မယ် ..။ မိုးစက် မဲဇာ ကို အနောက်ကနေ ဖက်လိုက်သည် . ။ “ ကိုကို ..ချစ်တယ်ကွာ . .” “ အင်း..ကိုကိုလဲ မိုးစက် ကို အရမ်းချစ်တယ် . .” “ ချစ်ရင် ဘာလို့ မိုးစက် အခန်းထဲက ထွက်သွားမလို့ လုပ်နေတာလဲ . . ဒီဘက်လှည့် ..” မိုးစက် က မဲဇာ ကို ဆွဲလှည့်လိုက်တော့ သူတို့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖြစ်သွား သည် ..။ မိုးစက်က ဘဲ စနမ်းလိုက်သလား မဲဇာကဘဲ စနမ်း လိုက်သလား ..မသိ ..။ အသက်ရှုသံတွေ ပြင်းလာသလို တယောက် နဲ့ တယောက် တင်းကျပ်နေအောင် ဖက်မိနေကြ သည် ..။ မဲဇာ ရဲ့ လက်တွေ က မိုးစက် တင်ပါးတွေကို ပွတ်သပ်နေ သလို မိုးစက် ကလဲ မဲဇာ ရဲ့ ကျောပြင်ကို ပွတ်သပ်လိုက် . .အားမလို အားမရ နဲ့ ကုတ်ခြစ်လိုက် လုပ် နေသည် . .။ ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ မဲဇာ ရဲ့ စိတ်တွေ လွတ်ထွက်သွား ပြီ . .။ မိုးစက် ကို သူမ ကုတင်ပေါ်ကို လှဲချကာ မိုးစက် ရဲ့ ည၀တ်အင်္ကျီလေး ကို ချွတ် သည် ..။ မီးရောင် အောက်မှာ မိုးစက် ရဲ့ တောင်ပူစာ ညီနောင် က တင်းထောင်နေသည် ..။ ဘရာ ရင်စည်း ခံဝတ်မထားလို့ မိုးစက် ရဲ့ ရင်သားတွေ က လှ ချင်တိုင်း လှနေကြ သည် ..။ လှလိုက်တာ မိုစက်ရယ် . .ကိုကိုနမ်းမယ်နော် . . .။ မဲဇာ နမ်း သည် ..။ ဖွဖွလေး . .။မိုးစက် သည် တခါဘူးမှ ယောင်္ကျားသားတွေ မထိဘူး..မနမ်းဘူးသေးတဲ့ သူမ ရဲ့ ရင် သား ကို မဲဇာ နမ်းနေတာကို ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်း ထကာ ခံယူနေရင်း ..သူမ ပေါင်ကြား ကို မာမာအချောင်းကြီး တခု က လာထိနေတာ သိလိုက်လို့ ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ မဲဇာ မှာ ဘောင်းဘီ မရှိတော့ ..။ သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီ ကို သူ ဘယ်အချိန်က ချွတ်ပစ်လိုက် မှန်း မိုးစက် မသိလိုက် ..။ တုတ်ခိုင် ရှည်လျားတဲ့ မဲဇာ ရဲ့ လိင်တန်ညိုညိုကြီး ကို မိုး စက် မြင်လိုက်ရလို့ တုန်လှုပ်သွား သည် ..။
မိုးစက် ပတ်ပတ် လဲ စိုစိုရွှဲနေပြီ ..။ အတွင်းထဲ က လှိုက်လှိုက်ပြီး ယားနေတယ် ..။ အထဲကို ကိုကို့ အတန်ချောင်းကြီး ထိုးထည့်ချင်မိတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကိုကို့ဒုတ်ကြီး က အကြီးကြီး ဘဲ..။ ဆန့်မှ ဆန့်ပါ့မလား . .မသိဘူး . .။ မိုးစက် လေ..ကိုကို နဲ့ ချစ်တယ် လို့ အိပ်မက်မက် ရင် အဲလိုဘဲ အေ၇တွေ တအား စိမ့်ယို ထွက်ပြီး ယားတယ် . .တအား ခံပစ်လိုက်ချင် စိတ်တွေ ပေါက်ခဲ့ တယ် ..။ ကိုယ့်ဖါသာ ပွတ်ပွတ်နေရတာလဲ အားမရတော့ဘူး . .။ ကိုကို့ကို ဒီလို ချိန်းတွေ့ချင်နေတာ ကြာပြီ ..။ သီသီဌေး က အင်တာနက် မှာ ယောင်္ကျား နဲ့ မိန်းမ လိင်ဆက်ဆံတာတွေ အမျိုးမျိုး ကို ကြည့်နိုင်တဲ့ ၀က်ပ် ဆိုက်တွေကို ပြောပြတယ် . .။ မိုးစက် လဲ အဲလို ယားယားပြီး အိပ်လို့ မရရင် ဒီဆိုက်တွေကို သွားပြီး ဗီဒီယိုတွေ ကြည့် တယ် ..။ ကြည့်လေ ဆိုးလေ ပေါ့ ..။ ခံချင်စိတ်တွေ က ပိုပိုများ လာရော . .။ မိုးစက် လဲ ဘော်လ်ပင် တုတ်တုတ်ကြီး တချောင်း လက်ဆောင်ရထားတာ ရှိလို့ အဲဒါကြီး နဲ့ပတ်ပတ်ထဲ ထိုးသွင်းမိရ တယ် . .။ ကိုကို နဲ့ ကားဂိုဒေါင်ထဲ တအားဖက်ပြီး နမ်းကြတုံးက ကိုကို့ ဟာကြီးက ရှမ်းဘောင်းဘီ ထဲက ထိုးထောင်ထနေပြီး မိုးစက်ရဲ့ ဆီးစပ် ကို လာဖိထောက်နေခဲ့တာ မိုးစက် တအား စိတ်တွေ ကယောင်ခြောက်ခြားတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတာ ..။ ဟော . .။ ကိုကို နို့စို့နေရာက မိုးစက် ကိုယ် အောက်ဖက်ကို လျောဆင်းသွား တယ် ..။ အို . . .မိုးစက် ဘိုက်သားတွေ ကို လျောက်နမ်းနေပြန်တယ် . .။ ယားတယ် . .ကိုကို . . ။ အာ . .ကိုကို မိုးစက် ချက်လေးထဲကို သူ့လျာ နဲ့ ထိုးကလိနေပြန်တယ် ..။
တော်တော် လုပ်လဲ လုပ်တတ်တဲ့ ကိုကို ..။ မိန်းမ အတွေ့အကြုံတွေ များနေပြီ ထင်တယ် ..။ ကိုကို့လုပ်ရပ်တွေ က မိုးစက် စိတ်တွေကို ပိုထကြွစေတယ် ..။ ကိုကိုက လျာနဲ့ချက်ပေါက်လေး ကို ကလိနေပေမဲ့ လက်တွေက မိုးစက်ရဲ့ နို့သီးဖုလေးတွေ ကို ချေနေဆဲဘဲ . .။ ဟော . .ချက်က နေ အောက်ဘက် ကို ထပ် ဆင်းသွားပြန်ပြီ . …။ မိုးစက် က ပေါင်ကြားက ပတ်ပတ် အနီးအနား က အမွှေးတွေကို သေသေသပ်သပ် ညှပ်ထား တာ ..။ ကိုကို က မိုးစက် ဆီးခုံ က အမွှေးလေးတွေ ကို လိုက်နမ်းနေတယ် .. ။ ဒီအချိန် မှာ မိုးစက်ရဲ့ ပတ်ပတ် ဘယ်လောက် ယားနေရလဲ ဆိုတာ မိုးစက်ဘဲ အသိဆုံး ..။ အရေတွေ က တအားထွက်နေတယ်..။ စီးကျနေတယ် ..။ ကိုကို က သူ့လက်တွေ ကို မိုးစက် ကိုယ်အောက် ကို ထိုးသွင်းလိုက်တယ် ..။ မိုးစက် ဖင်တုံးတွေ ကို လက် နှစ်ဘက်နဲ့ ဆုတ်ကိုင်လိုက်တာ ..။ အို ..ကိုကို ဘာလုပ်မလို့လဲ ဆိုတာ မိုးစက် သိလိုက်တယ် ..။ ကိုကို . ..သူ..သူ မိုးစက် ပတ်ပတ် ကို ယက်တော့မလို့ ..။ အို ..ဟုတ်တယ် ..အာ့ …ကိုကိုလျာကြီး ..နဲ့ မိုးစက် ပတ်ပတ် ကို ယက်ပြီ ။ အို..အင်…အင်…အင်…ဟင့်..ဟင့်…..ကိုကို့ . …အား . .. ..အာ……….။ ကိုကို့လျာကြီး က မိုးစက် ပတ်ပတ် အပေါ်ကို ဖိဖိ ပွတ်သွားလိုက်တိုင်း မိုးစက် ခါးလေးကော့တက်သွားရ သည် ..။ မိုးစက် စိတ်ကူးယဉ်မိ ခဲ့တဲ့ ဘာဂျာအယက်ခံတဲ့ဟာ က အခု တကယ် ဖြစ်နေပြီ..။ တကယ် အမှုတ်ခံနေရပြီ ..။ အို . .ကိုကိုရယ် ..မိုးစက် ထိလွန်းလို့ ကော့နေရပြီ . .။ ကိုကို့ လျာကြီး နဲ့ လွတ်အောင် ဆုတ်ပြေးဖို့ လုပ်ပေမဲ့ ကိုကို့လက်နှစ်ဘက် က မိုးစက် ဖင်တုံးတွေ ကို တအား ဆုတ် ကိုင်ထားတာ မိုးစက် ရုန်းထွက်လို့ မရနိုင်ဘူး ..။ ကိုကို ယက်တာ ကို ခံနေရတယ် ..။
ကိုကို့လျာ က တော်တော် သွက်တာ ဘဲ ..။ မိုးစက် အစိ ကို ကလိတာမှ မိုးစက် တကိုယ်လုံး ကျင်တက်ပြီး တုန်ခါနေရ တယ် ..။ တကယ် လဲ လုပ်တတ်တယ် …ကိုကိုရယ် ..။ ကိုကို့လျာထိပ် ချွန်ချွန် က မိုးစက် အစိလေး ကို ရစ်ပတ် ထိုးဆွနေတာ မိုးစက် အရမ်း အကောင်းလွန် သွားတာ ခေါင်းအုံးတွေ ကို လက်နဲ့ ဆုတ်ခြေပြီး တအား အော် ညည်းမိလိုက်ရ တယ် ..။ ကိုကို့လျာကြီးလဲ အယက် ရပ်သွားတယ် ..။ မောလိုက်တာ ကိုကို ရယ်…မိုးစက် ပက်လက်ကြီး ပေါင်ကြီး ဖြဲကားထားပြီး မျက်စိတွေ ပိတ်ထားနေတယ် ..။ ကိုကို့ကို မရှက်နိုင်တော့ဘူး ..။ ပတ်ပတ်ကြီး လဲ ပေါ်လို့ . .။ ချစ်သူ ဘ၀ မှာ အရှက် ကုန်ရတော့တာဘဲ ..။ အရမ်းမောတယ် ..။ ကိုကို လဲ ဆက် မယက်တော့ဘူး ..။ ကိုကို ဘာများ လုပ်နေလဲ မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ..အို ..ကိုကို မိုးစက် ကိုယ်ပေါ်ကို တက်ခွထားနေတယ် ..။ သူ့အတန်ကြီး က မိုးစက် ပတ်ပတ် အပေါက် မှာ တေ့မိနေပြီ ..။ အို . . .ကိုကို သူ့ဟာကြီး နဲ့ မိုးစက် ပတ်ပတ် ကို ဟိုဒင်း လုပ်တော့မလို့ပါလား ..။ လိုချင်တာကလဲ အရမ်း ..။ ယားတာ ကလဲ ထိန်းမရအောင် ..။ တကယ်တမ်း ..အဲဒါကြီး နဲ့ ထိုးထည့်တော့မယ် ဆိုတော့ လဲ ကြောက်နေတယ် ..။ သူ့ဟာကလဲ ကြီးလွန်းလို့ . .။ မိုးစက် က ဖြစ်ပါ့မလား…ကိုကို လို့ မေးတော့ ဖြစ်တယ် မိုးစက် ..မိုးစက် မနာအောင် . .ကိုကို လုပ်ပေးမှာပေါ့..လို့ ပြောတယ် ..။ အထဲကို ထိုးမထည့်သေးဘဲ မိုး စက် ပတ်ပတ် အကွဲကြောင်းအတိုင်း ပွတ်တိုက်နေသေးတယ် ..။ သူ့အတန်ကြီး ရဲ့ ထိပ် က ထိပ်ဖူးကြီး နဲ့ မိုးစက် ပတ်ပတ် နှုတ်ခမ်းသား ထူထူလေးတွေ ကို ပွတ်မိတော့ မိုးစက် ဖင်တုန်းတွေ ရမ်းခါသွားရလောက်အောင် ဘဲ ..။
ကိုကို က မိုးစက် နှုတ်ခမ်းတွေ ကြားက မိုးစက် လျာလေး ကို စုတ်ယူ တယ် ..။ မိုးစက် လဲ ကိုကို့လည်ဂုတ် ကို လှမ်းဆွဲဖက်ပြီး ..ကိုကို့ကို အငမ်းမ၇ ဘဲ ပြန်နမ်းမိ တယ် ..။ ကိုကို က မိုးစက် ကို အနမ်းတွေ ဘက် ဆွဲဆောင်နေချိန် ..သူ့ထိပ်လုံး အထစ်ကြီး ကို မိုးစက် ပတ်ပတ်ထဲကို အသာလေး ဖိထည့်လိုက်တယ် ..။ မိုးစက် ပတ်ပတ် ကလဲ တအား စိုရွှဲနေတာမို့လားမသိဘူး ..။ တင်းကျပ်နေပေမဲ့ မနာကျင်လိုက်ဘူး ..။ ကိုကို့ဒုတ်ကြီး ..မိုးစက် ပတ်ပတ်ထဲ တစ်ဆို့ကြီး ထိုးဝင်မိနေပြီ ..။ ကိုကို က အဲဒီဘက် ကို အာရုံ မထားမိအောင် မိုးစက် နို့သီးလေးတွေ ကို တဖက်ပြီးတဖက် စို့ပေးနေပြန်တယ် ..။ အောက် ကလဲ ဖြေးဖြေးနောက်ဆုတ် ..ဖြေးဖြေး ထိုးထည့် လုပ်နေတယ် ..။ ကျပ်ထစ်နေပေမဲက အရေတွေကြောင့် စီးကနဲ..စီးကနဲ မိုးစက်အတွင်းသားတွေကို ပွတ်တိုက်ပြီး ၀င်ထွက်နေတော့ အရသာ က အရမ်းအရမ်း ထိမိ ကောင်းလွန်းနေတယ် ..။ မိုးစက် လဲ ကိုကို့ ရင်ဘတ် ကို လျာနဲ့ လိုက်ယက် နေမိတယ် .။ လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်နေတာပေါ့ ..။ ကိုကို့ ဟာ ကလဲ မိုးစက် ပတ်ပတ်ထဲ တစွပ်စွပ် နဲ့ ၀င်ထွက်နေတယ် ..။ အို…..ကိုကို..ကိုကို…အင့်..ဟင့်ဟင့် … ကိုကို့ထိုးထည့်တာတွေ သွက်လာ တယ် ..။
မိုးစက် လဲ အရသာ ဘယ်လိုရှိမှန်း မသိဘူး ..။ အောက် ကနေ ဖင်တွေ ကို ကော့ကော့ပေးမိရ တယ် ..။ ကိုကို နဲ့ စိတ်တူ ကိုယ်တူ ချစ် ပစ်လိုက်တယ် ..။ “ ကောင်းလား..မိုးစက် . .” “ အင်း…အင်း..တအား ကောင်းတယ် . .” “ ကြိုက်လား ..” “ အင်း..အင်း..အရမ်းအရမ်း ..” ကိုကို ဆောင့်ထည့်လာ တယ် ..။ ဒီကလဲ ဆောင့်တာကို ကြိုက်တယ် ..။ နှစ်ယောက်စလုံး ဦးတည်နေတဲ့နေရာ တခု ကို မရောက်ရောက်အောင် ပြိုင်တူ ကြိုးစားကြတယ် ..။ ကိုကို့ဆောင့်အားက ကြမ်းလာတယ် ..။ အားပါလာ တယ် ..။ ဖေါင်းဖေါင်း နဲ့ အသားချင်း ရိုက်ခတ်သံတွေ မြည်လာတယ် ..။ ကိုကို့အတန်တဆုံး..၀င်လိုက် ထွက်လိုက် တဖွပ်ဖွပ် အသံတွေ နဲ့ ဆူညံနေတာဘဲ ..။ မကြာခင် မိုးစက် စောစော က မတရား အကောင်းလွန်သလို ကျင်တက် တုန်တက် တဲ့ ကောင်းတာကြီး ထပ်တခါ ကြုံလိုက်ရပြီး ..မိုးစက် ဖလက်ပြသွားရတော့တာဘဲ ..။ ကိုကို လဲ သူ့အတန်ကို မိုးစက် ပတ်ပတ်ထဲက ဆွဲထုတ်ပြီး သူ့ညာလက် နဲ့ ကွင်းတိုက်လိုက်တာ သူ့အတန်ထိပ် ပေါက် က အရေဖြူဖြူပျစ်ပျစ်တွေ တအား ပန်းထွက်ကုန်တယ် ..။ မိုးစက် ဘိုက်သား ချပ်ချပ် လေး ပေါ်ကို ကိုကို ထုတ်ပစ်လိုက်တာ ..။ ပူနွေးနွေး သုတ်ရေတွေ ကို မိုးစက် အထူးအဆန်း အနေနဲ့ ကြည့်နေမိ တယ် …။ ကိုကို က နောက်ဆုံ သုတ်ရေတစက် ကျန်တဲ့အထိ သူ့အတန်ကို တိုက်ထုတ်နေတယ် ..။ သူ့ေ၈ွးစိတွေ က ခါရမ်း နေတယ် ..။ အို ..မိုးစက်အတွက် ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံ မို့ အရာရာ က ဆန်းနေတယ် ..။ ကိုကို က မျက်လုံးစုံမှတ်ပြီး …“ အားးးး……..ကောင်းလိုက်တာ မိုးစက်လေး ရယ် . . . .” လို့ ညည်းလိုက်ပြီး မိုးစက် ဘေး မှာ လှဲချလိုက်ပါတယ် . . ။ …… မိုးစက် တကိုယ်လုံး နာကျင်နေသည် ..။
အထူးသဖြင့် မိုးစက် ရဲ့ ပတ်ပတ် ..။ ည က ကိုကို လုပ်သွားတာပေါ့ ..။ မိုးစက် ရဲ့ အပျိုစင် ပတ်ပတ် ကို ..။ အခု အရမ်း ကျိန်းနေ စပ်နေ သည် ..။ မိုးစက် ရဲ့ နို့သီးလေးတွေ လဲ ကိုကို စို့ သွားတာ ယောင်ကိုင်းနေသလိုဘဲ ..။ ည က ကိုကို နို့သီးလေးတွေ ကို စို့လိုက် ..သွားနဲ့ မနာအောင် ဖွဖွလေး ကိုက် လိုက် နဲ့ တချိန်လုံး လိုလို လုပ်ထားတာ ..။ မိုးစက် ကိုယ် ချစ်တဲ့လူကို ကိုယ့် အပျိုစင် ပန်း ကို ပေးလိုက်ရတာ စိတ်ထဲမှ ကြည်နူး ကျေနပ်နေမိ သည် ။ တော်ပါသေး သည် ..။ ကိုကိုကြီး ပြန်မရောက်သေးလို့ ..။ မိုးစက် လမ်းလျောက်ရင် ကွတတ နဲ့ ဖြစ်နေလို့ ..။ အခု တော့ အိပ်ရာထဲ မှာဘဲ ခွေနေမိ သည် ..။ ကိုကို က မိုးစက် ဟမ်းဖုန်းကို ခေါ် သည် ..။ မိုးစက်လေး နေကောင်းရဲ့လား ….တဲ့ . .။ ကိုကို လိုးထားလို့ ခွေနေတယ် ကိုကိုရေ့…လို့ ပြောချင်လိုက်တာ ..ဟိ …။ မိုးစက် အခု အပျို မဟုတ်တော့ဘူး ..။ တိတ်တဆိတ်လေး ညက အိုသွားပြီ ..။ အိုသွားပေမဲ့ မိုးစက် ကျေနပ် တယ် ..။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ နဲ့ အိုလိုက်ရတာ ..။ ကိုကို ချစ်ပေးတာတွေ ကလဲ တအား ကောင်းတယ် ..။ ဘယ်တော့ မှ ဒီည ကို မမေ့ဘူး ..။ ကိုကို နဲ့ ပထမဆုံး အချစ်လွန်ကြတဲ့ ညလေးမို့ . .။ နောက်တစ်နေ့ တွင် “ ညီမလေး ..” “ ကိုကိုကြီး ..မိုးစက် ဈေးမှာ ..” “ အေး ..မဲဇာ လိုက်ပို့တာလား ..” “ ဟုတ်တယ် ..ဘာလို့လဲ ..ကိုကိုကြီး ဘဲ မိုးစက် လုံခြုံရေး အတွက် ကိုမဲဇာ ကို ခေါ်သွားရမယ် ဆို ..” ဖြိုးမောက် သူ့စကား နဲ့ သူ မိနေသည် ..။ ဟုတ် သည် ..။ သူက ရန်သူတွေ များတော့ ညီမလေး မိုးစက် ကို ရန်ရှာမှာ စိုးလို့ မဲဇာလို လူတယောက် ကို ကာကွယ်စေချင် ခဲ့လို့ အမြဲ အဖေါ်ခေါ်သွားဖို့ ပြောခဲ့ သည် ..။
“ ဟိုတနေ့ကလဲ ကိုကိုကြီး ခိုင်းလို့ ဆိုပြီး မိန်းမနှစ်ယောက် ကို လူတစု ကားနဲ့ လိုက်တာ သူ လိုက်သွားသေးတယ် .. မိုးစက် က ဈေးလိုက်ပို့ခိုင်းတာ…” “ အေး..သူ့ကို ကိုကိုကြီး အကူအညီ တောင်းလိုက်တာ…” “ အဲဒါ ကိုကိုကြီး ရဲ့ ဆော်တွေ လား . .” “ ဘော်ဒါတွေ ..မိုးစက် ..” “ အခု ဘယ်ဈေးမှာ လဲ ..” “ မားကက်ပလေ့ မှာ ..” “ အိုကေ ..မိုးစက် ..ဒါဘဲ..ဒါဘဲ ..” မိုးစက် က သူမ နဲ့ မဲဇာ မားကက်ပလေ့စ် မှာ ရောက်နေတယ် လို့ ဖြိုးမောက် ကို ပြောလိုက်ပေမဲ့ တကယ်တမ်း ရောက်နေတာ က ဟိုတယ်တခု ရဲ့ အခန်းတခန်းထဲ မှာ ဖြစ် သည် ..။ မိုးစက်ကလဲ မဲဇာ ရဲ့ လက်ကို ပြန် ဆုတ်ကိုင် လိုက် သည် ..။ “ မိုးစက် ကို ချစ်လား …” “ အရမ်း ချစ်တယ် ..မိုးစက်ရော ကိုကို့ကို ချစ်လား . .” “ ချစ်တယ် ..” မိုးစက် နဲ့ အိမ်က ထွက်ပြီး လမ်းမှာ လူရှင်းတဲ့ လမ်း တနေရာ မှာ တယောက် နဲ့ တယောက် အငမ်းမရ နမ်းမိကြ သည် ..။ သူတို့ ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေ ကို တိုင်ပင်ထားသလိုဘဲ အသီးသီး ချွတ်ခွာပစ်နေကြ သည် ..။ ကုတင်ပေါ်ကို ရောက်ရှိသွားကြ သည် ..။ လှလွန်းတဲ့ မိုးစက် ရဲ့ ၀တ်လစ်စလစ် ကိုယ်တွေ ကို မဲဇာ က ကြည့်လို့မ၀ ..။ “ ကိုကို ဘာကြည့်တာလဲ ..ရှက်တယ်ဆို ..” မိုးစက် က သူမ ပေါင်တန်ဖွေးဖွေး တွေ ကို စေ့လိုက် သည် ..။
အသားက ဖြူလွန်းလို့ မိုးစက် အင်္ဂါစပ် က နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေ က ပန်းနုရောင် လေး ..။ မဲဇာ မိုးစက် ပေါင်ကြား ကို ခေါင်းထိုးဝင်ပြီး မိုးစက် အင်္ဂါစပ် ကို နမ်းရှုံ့ သည် ..။ မိုးစက်ရဲ့ ခုံးမို့နေတဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီး သည် အမွှေးအမြင် ဘာမှ မရှိဘဲ ပြောင်ခုံး ကာ လှလွန်းနေ သည် ..။ မိုးစက် လဲ…ပထမ တခစ်ခစ် နဲ့..“ ကိုကို မိုး စက် ယားတယ်..လုပ်နဲ့ . .” လို့ ရယ်မောကာ ပြော သည် ..။ နောက်ပိုင်းမှ မဲဇာ ရဲ့ လျာကြမ်းကြီး သူမ အစိလေး ကို လာ ထိုးကော်လိုက်သောအခါ မိုးစက် တင်ပါးကြီးတွေ လှုပ်ခါ သွားရ သည် . .။ “အို..ကိုကို …ဟင့် …ဘယ်နေရာတွေ လျောက် နမ်းနေတာလဲကွာ . .” မဲဇာ က မိုးစက် ဘာပြောပြော ဂရုမစိုက်တော့ ..။ သူ့လျာကြီးနဲ့ အကွဲကြောင်းတလျောက် ယက်ပေးနေပြီ ..။ မိုးစက် က သူ့လျာကြီး ကို ရှောင်တိမ်းလိုပေမဲ့ မဲဇာ က သူမတင်ပါးတွေ အောက် ကို လက်ထိုးသွင်းကာ တင်ပါးစိုင်တွေကို သေသေချာချာ ဆုတ်ကိုင်ထားပြီး ယက်ပေးနေတာမို့ မိုးစက် ရုန်းလို့ မရဘဲ သူ ယက်သမျှ ခံနေရ သည် . .။ မဲဇာ ရဲ့ လျာကြီး က မိုးစက် အင်္ဂါစပ်ထဲ ကို အတင်းတိုးဝင်နေ သည် ..။ ရိုးရိုး ၀င်တာမျိုးမဟုတ် ..။ မွှေ့ရမ်းပြီး ကလော် နေတာ ..။ အို့….ကိုကို…အား…..မိုးစက် ..မိုးစက် …မခံနိုင်တော့ဘူး . ..အီး ……ကိုကို…ကိုကို….ကိုကို့လျာကြီး ကို ပြန်ထုတ်လိုက်ပါတော့ ..မိုးစက်..မိုးစက် …အို . . . .။ မိုးစက် ခါးလေး ကော့တက်သွား သည် ..။ အို…ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုရယ် …အင်ဟင် အင်ဟင် …..အားး…… မိုးစက် တကိုယ်လုံး က အကြောအချင်တွေ ဆတ်ဆတ်ခါ သွားရအောင် ကောင်းလွန်းတဲ့ အရသာကို ရရှိလိုက် လေပြီ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ခံစားမူမျိူး ရရှိလေတော့သည်။ ပြီးးးး